Nabadoonada Jubbaland oo rajo ka muujiyey shirka maamulka iyo dowladda federaalka (Dhgeyso) – Radio Daljir
Agoosto 24, 2013 5:07 b 0
Kismaayo, Agusut 24, 2013 – Waxgaraka iyo Nabadoonada gobollada Jubooyinka ayaa si heer sare ah u soo dhoweeyey shirka dowladda federaalka ah iyo Jubbaland uga socda magalaada Adis Ababa, iyadoo aysan jirin ilaa hadda qodobo rasmi ah oo la isku racaay oo la shaaciyey.
Nabbadoon Cabdicasiis Af-gaduud oo jooga magaalada Kismaayo ee xaruunta Jubbada Hoose,ayaa arintaas ka hadlay, ?wuxuuna sheegay in muhiimada shirka labbada dhinac ay faa?iido ugu jirto Soomaalida oo idil.
Wuxuu ku cel celiyey in la wadda sugo natiijada ka soo baxda shirkaas ka socda Ethopia, isagoo ugu baaqay dowladda iyo Jubbaland iyo ay labbaduba muujiyaan is afgarad iyo horumar laga sameeyo wadda-hadalka, Nabadoonka ayaa sheegay in Jubbaland ay mar kasta mudan tahay in ay hesho doorkeeda ah in ay ka mid noqoto dowladda gobolleedyada dalka.
? Jubbaland xaq ayey u leedahay in ay noqoto mid ka mid ah dowlad gobolleedyada dalka, waa taas mida aan ka sugayno shirka Adis Ababa ee dalka Ethopia? ayuu yiri Nabadoon Cabdicasiis oo la hadlayey Radio Daljir
Ugu dambeyntii Nabbadoon Cabdicasiis Af-gaguud wuxuu mid heer wanaagsan maraysa ku tilmaamay xaalada amaan ee magaalada Kismaayo iyo deeganada Jubbaland, wuxuu sheegay in ay jiraan weeraro ay geystaan shabaab balse inta badan laga hortago.
Dhegeyso Nabadoon Afgaduud oo u waramay Xuseen Madar oo Daljir ka tirsan
Mashruuc lagu dhisayo waddo Jey ah oo maanta ka bilowday xaafada Garsoor ee Galkacayo (Dhegeyso)